I-condo yangasese ethokomele, i-wifi yamahhala (2A)
Zhonghe District, New Taipei City, I-Taiwan
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Yo
Leli yi-condo ethokomele endaweni ekhethekile ezolile, yijabulele!
1) Igumbi liyi-condo ethokomele (i-ensuite) endaweni ezolile, eduze nje kwendawo ehamba egqumeni engama-300m, enomoya ohlanzekile, walabo abadinga ukuhlala ngokunethezeka.
2) Kuthatha cishe imizuzu eyi-10-12 ukuya esiteshini se-MRT Jingan ngezinyawo, futhi kunezitolo eziningi ezitholakala kalula, kanye nemakethe enkulu ye-24h endleleni eya esiteshini se-MRT.
3) Inendlu yokugezela yangasese (ukuhlukaniswa okomile nokumanzi), izinto zangasese kanye nethawula elikhishwayo.
4) Ine-TV ye-LED, isiqandisi, i-wifi yamahhala, nenethiwekhi yekhebula. Izofika nento yokomisa izinwele, iziphanyeko zezingubo, igedlela likagesi, namabhodlela amanzi okuphuza.
5) Iwasha yomphakathi ingasetshenziswa mahhala, futhi ngaphezu kwalokho indawo yokomisa izingubo zangaphandle.
6) Leli gumbi linombhede owodwa oyizinyawo ezingu-3.5, HHAYI umbhede ophindwe kabili, ngakho-ke abantu abangaphezu kuka-2 abanconywa, futhi sihlinzeka ngombhede ophansi.
7) Igumbi liku-2F wesakhiwo AKUKHO ikheshi; kukhona isitebhisi sangaphandle se-2F, kanye nomnyango wekhadi kazibuthe. kunamakamelo ama-4 kuphela kanye nephasishi elifushane lomphakathi ngaphakathi, alikho igumbi lokuhlala noma okunye.
8) Le ndlu isendaweni okuhlala abantu, kunenkundla yezemidlalo yesikole samabanga aphansi kanye nendawo ehamba phambili kwamakhelwane, ngakho-ke kukhona abantu abangena emzileni wezemidlalo. Kukhona nesiteshi sonogada somphakathi emnyango wendlela, futhi bazoba khona kuze kube yihora le-11-12pm.
9) Ngenxa yomthetho wase-Taiwan nokuvikela sobabili, sizosayina inkontileka yokuqasha inyanga engu-1, eqala ngenyanga eyodwa edlule yedethi yakho yokuphuma. isibonelo: uphuma ngo-9/6, bese isivumelwano sizosayinwa ngo-8/6 kuya ku-9/6.
10) Ubukhulu baleli gumbi bucishe bube ngamamitha-skwele ayi-12.
*** KUBALULEKILE! ***
1) Qiniseka ukuthi unciphisa umsindo.
2) Akukho ukubhema endlini.
3) Ayikho insiza yokuhlanza igumbi nsuku zonke enikeziwe.
4.58(229 okushiwo abanye)
4.58 · 229 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Zhonghe District namaphethelo